Guul - AngelBiss Healthcare Inc.
Muddo sanado ah, AngelBiss waxay sameysaa xoogaa guulo wax ku ool ah oo ku saabsan maadada oksijiinta iyo mashiinka nuugista la qaadan karo ee la muujiyey inay macno u leedahay codsiyada caafimaadka aadanaha.
NO.1 - In ka badan 18 shatiyadaha cusub ee horumarinta iyo diiwaangelinta qalabka wax lagu ururiyo iyo oksijiinta
NO.2 - Batarigii ugu horreeyay adduunka ee dib u soo celiya 5L Oxygen Concentrator, nadiif ahaanta oksijiinta waxay gaadhaysaa in ka badan 93%
NO.3— Tijaabada Goobta ANGEL 5S 5L Oxygen Concentrator on Tibet 15000ft, daahirsanaanta oksijiinta wali wey gaari kartaa in ka badan 93%
NO.4 - Mashiinka nuugista ee dib loo soo celin karo 3hours oo aan lahayn awood AC ah
NO.5- 20psi cadaadiska sare Oxygen Concentrator wuxuu gaaraa 95%
NO.6- 90psi cadaadiska sare Oxygen Concentrator wuxuu gaaraa 95%
NO.7- 60LPM Dual Flow 4bar Oxygen Generator wuxuu gaaraa 95%
NO.8 -10LPM 7bar Generator Oxygen wuxuu gaarayaa 95%
MAYA 9 - Isbeddel ku yimaadda wax kasta oo Oxygen Concentrator ah 0.1% at 95.5% ama xoog saarista kale ee cayiman.
NO.10 - TUV-SUD ayaa hantidhawr ku sameeyay ISO13485: Shahaadada 2016 iyo CE
MAYA.11- Inbadan ayaan diyaar u ahayn inay muujiyaan.
Mustaqbalka soo socda, AngelBiss wuxuu sii wadi doonaa dadaalkiisa ugu fiican si uu macaamiisha ugu keeno khibrad wax soo saar wanaagsan. Kooxda R & D waxay sameynayaan cilmi baaris dheeri ah oo ku saabsan dhinacyada dalabyada kala duwan, sida Nitrogen Oxygen Generator, Aquarium, iyo Ozone Application.
AngelBiss wuxuu bartilmaameed u yahay inuu noqdo gaas kale oo 10 sano gudahood ah kooxda kaliya ee tiknoolajiyadda iyo wax soo saarka.